Huawei Mate 20 RS Porsche Design: Famaritana sy vidiny | Androidsis
Ny hetsika fampisehoana ny Huawei Mate 20 dia mamela antsika hanana zava-baovao maro. Ho fanampin'ireo modely roa mahazatra ao anatin'ny faritra avo, izay efa niresaka taminao izahay eto, ny marika dia manolotra modely miaraka amin'i Porsche. Zatra nahazatra anao ny miara-miasa amin'ny fiara sy Avelany miaraka amin'ity Huawei Mate 20 RS Porsche Design ity izahay, izay miavaka amin'ny maha finday faran'izay lafo vidy ny marika.
Ity Huawei Mate 20 RS Porsche Design ity dia fitaovana iray maka ny ankamaroan'ny masontsivana ao amin'ny Mate 20 Pro, fa miaraka amina endrika hafa, mirentirenty kokoa. Ka tsy isalasalana fa hanaitra ny fahalianan'ireo izay mitady zavatra lafo vidy sy tsy miankina izy io. Inona no azontsika antenaina amin'ity fitaovana ity?
Izy io dia ao amin'ireo fitaovana ampiasaina hisongadinan'ny telefaona. Huawei sy Porsche dia mikasa ny hampita sarin'olom-bolo, hatsaran-tarehy ary fanavakavahana miaraka amin'ity kinova farany avoakany ity. Zavatra efa tratran'izy ireo, araka ny hitantsika amin'ny famolavolana ilay fitaovana. Izahay dia mamela anao voalohany miaraka amin'ny antsipiriany feno.
1 Famaritana Huawei Mate 20 RS Porsche Design
Famaritana Huawei Mate 20 RS Porsche Design
Famaritana teknika Huawei Mate 20 RS Porsche Design
modely Matte 20 RS Porsche Design
vidiny 1695 sy 2095 euro
Ny ao ambadiky ny fitaovana no tena mpiaro azy. Ho an'ny famolavolana azy, ny orinasa dia nampiasa vera sy hoditra. Azontsika atao ny mahita fa ny fifangaroan'ny fitaovana roa dia mampiavaka azy hafa amin'ny maodely sisa natolotry ny orinasa tamin'ity hetsika ity. Manome anao endrika mirindra sy kanto kokoa izy io. Nahazo aingam-panahy azy ireo tamin'ny famolavolana fiara hazakazaka hamoronana ity famolavolana ny Huawei Mate 20 RS Porsche Design ity, araka ny nambaran'ny marika sinoa tamin'io hetsika io.
Ho fanampin'izay dia tokony homarihina fa ny hoditra izay hitantsika ao ambadiky ny fitaovana dia namboarina. Ny fitambaran'ny vera, vy ary hoditra dia nampiasaina ihany koa mba hahatanteraka ny famaranana ny fitaovana amin'ity lafiny ity. Izany rehetra izany dia ny fahazoana ny vokatra tadiavina sy tadiavin'ny roa tonta.
Amin'ny ambaratonga manokana dia tsy misy fahasamihafana misy amin'ny Mate 20 Pro. Top iray amin'ireo karazana kalitao avo lenta, misy fika manokana sy fakan-tsary tsara izay tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny.
Araka ny azonao an-tsaina, miatrika kinova iray amin'ny rendrarendra indrindra amin'ny avo lenta izahay. Ka tsy ho azo idirana mihitsy ny vidiny, lafo kokoa noho ny Mate 20 Pro. Tadidio fa ity fitaovana ity dia natomboka tamin'ny vidiny 1049 euro, izay mihoatra an'ity fanontana manokana ity miaraka amin'i Porsche. Na dia tsy nahagaga olona aza izany.
Mahita kinova roa amin'ity Huawei Mate 20 RS Porsche Design ity izahay raha ny momba ny fitehirizana. Misy ny kinova misy 128GB fitehirizana ary ny hafa misy 256GB fitehirizana. Ka afaka manana safidy hisafidy amin'izy roa isika. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny vidiny, izay efa nohamafisin'ny mpanamboatra. Ny vidiny dia:
Version miaraka amin'ny 8/128 GB: 1695 euro
Version miaraka amin'ny 8/256 GB: 2095 euro
Araka ny hitanao dia tsy azo idirana mihitsy, ny endriny lafo indrindra dia mihoatra ny 2.000 euro. Vidiny izay vitsy no vonona handoa, na dia misy vondrona mpanjifa aza izay azo antoka fa tena liana amin'ity Huawei Mate 20 RS Porsche Design ity. Momba ny daty famoahana azy, andrasana hivoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 16 Novambra. Afaka iray volana dia ho hita manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Mate 20 RS Porsche Design: Namboarin'ny finday ny rendez-vous
Huawei Mate 20X: smartphone an'ny Huawei